'Oromoon waldhabdee biyyoota lamaaniitiin miidhame malee bu'aa hinarganne' - BBC News Afaan Oromoo
Waldhabdee Itoophiyaa fi Ertiraa jidduu tureen adda waraanaa irratti hirmaachuun lubbusaanii kanneen wareegan keessaa hedduun ijoollee Oromoo akka turan dubbatama. Kanaafuu nageenya busuun biyyoota lamaanii bu'aa malee miidhaa akka hinqabaannee dubbatu jiraattoonni Magaalaa Naqamtee BBC'n dubbise.
Mootummaan Ertiraas erga waamichi nagaa gama mootummaa Itoophiyaatiin taasifameen torban lamaan booda yeroo jalqabaatiif har'a ifatti dubbateera.
Pirezidaantiin biyyatii Isaayaas Afawarqiin haasawa midiyaa biyyattii irratti taasisaniin, waamicha gama Itoophiyaatiin waldhabdee daangaa biyyoota lamaan jidduu waggoota 27 darbaniif ture hiikuuf dhiyaateef ilaalchisuun dubbataniiru.
Akkuma haasaan simannaa yaada nagaa pirezidaantichaa dhagahameen sa'aatiiwwan muraasa boodas, Mummichi Ministira Itoophiyaa Dr Abiy deebii waamicha nageenyaa simachuu isaanitiif pirezidaantii Isaayaas galateeffataniiru.
BBCnis adeemsa waldiddaa biyyoo lamaanii hiikuuf taasifamaa jiru kanarratti namoota dubbifneera.
Haaluma kanaanis lobbo dasaalanyi Asaffaa jiraataan magaalaa Naqamtee fi waggoota saddeetiin miseensa raayyaa biyyaa ta'uun Tigraay jiraachu dubbatu. Muxxannoo isaanii kana irraa ka'uun erga lolli dhaabateen boodas ummanni daangaarra jiraatu haaluma wal qocollootii jiraachaa akka ture dubbatu.
Haa ta'u malee sababii siyaasaatii waldhabdeen umamu malee lammiilee biyyoota lamaaniiyyu keessa jiraatan tokkicha, keessattu isaan daangaarra jiraatan jedhaniiru.
Kanaafuu ''tarkaanfiin mootummaan amma fudhataa jiru gaariidha, sababii lola keessaa kisaaraa malee bu'aan hinjirreefu'' jedhaniiru.
Jiraataan magaalaa Naqamteefi barataa yunivarsitii kan tokko ammoo erga minsitirri mummichaa aangootti dhufanii booda tarkaanffiiwwan fudhatamaa jiran baayyee gaariidha jedhanniiru.
Kana malees walitti dhufeenya biyyoota lamaanii foyya'uun lammiilee keenya sababii siyaasaatiin Eritiraa keessatti baroota dheeraaf danqaman akka gara biyyaatti deebii'aniif carraadha jedhaniiru.
Obboo Misigaanu Olii gama isaanitiin ''waldiddaa biyoota lamaan jidduu tureen Oromoon ni miidhame malee bu'aa hin argannee'' jedhaniiru. Kanas yoo ibsan, namoota kumaa hedduu waraana Baadma irratti lubbunsaanii darbe keessaa hedduun ijoollee Oromoo turan jedhera.